COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်လျင်မြန်စွာပြန့်နှံ့လာသည်နှင့်အမျှမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ၊အခြားပစ္စည်းကိရိယာများလည်းလိုအပ်လာသည်။ ထိုရောဂါသည်သွေးကြောထဲရှိအောက်စီဂျင်ရရှိမှုကိုလျော့ကျစေပြီးအသက်အန္တရာယ်ရှိသည့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာများ၊ CPAP၊ အောက်စီဂျင်စက်များစသည့်ကဲ့သို့အောက်စီဂျင်အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများလိုအပ်မှုသည်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တိုးပွားလာနေသည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် oxygen concentrator(အောက်စီဂျင်စက်) အကြောင်းများစွာမကြားဖူးပါ။ ဒီ COVID-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေစဉ်အတွင်း oxygen concentrator(အောက်စီဂျင်စက်) ၏အရေးပါမှုကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာသိရှိစေရန်Blogကို‌ရေးလိုက်ရပါသည်။
Oxygen Concentrator (အောက်စီဂျင်စက်)ဆိုတာဘာလဲ?
Oxygen Concentrator (အောက်စီဂျင်စက်)သည်နိုက်ထရိုဂျင်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုအားမှတဆင့်အောက်စီဂျင်ကိုစုစည်းပေးသောကိရိယာဖြစ်သည်။
Oxygen Concentrator (အောက်စီဂျင်စက်) ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ?
cpap.com ၏အဆိုအရ "Oxygen Concentrator (အောက်စီဂျင်စက်)သည်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလေထုကိုစစ်ထုတ်ပေးပြီးလိုအပ်သောသိပ်သည်းဆကိုဖိပေးကာသန့်ရှင်းသောလေထုကိုသွေးခုန်နှုန်းဖြင့်ပို့လွှတ်သည့်စနစ် (သို့) အဆက်မပြတ်စီးဆင်းသည့်စနစ်ဖြင့်လူနာများထံပေးပို့သောစနစ်ဖြစ်သည်။
Oxygen Concentrator (အောက်စီဂျင်စက်) သည် COVID-19 အတွက်မည်မျှအရေးပါသလဲ?
COVID-19 ၏အဓိက issue မှာအသက်ရှူမဝခြင်းဖြစ်သည်။ ASTMH အရ "ရောဂါသည် ၇-၁၀ ရက်အတွင်းနာမကျန်းဖြစ်ပြီးရောဂါလက္ခဏာပြတတ်သည်။ COVID-19 ‌ရောဂါအတွက်များစွာသောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းပြင်းထန်သော COVID-19 ရောဂါအတွက်အဓိကကုသမှုသည်အောက်ဆီဂျင်အထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။"
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသောလူနာများသည်အားအင်ကုန်ခန်းခြင်းစသည့်ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများခံစားရနိုင်သည်။ လူဦးရေထူထပ်သောဆေးရုံများ၊လူနေအိမ်များတွင်လေဝင်လေထွက်များအလုံအလောက်မရရှိခြင်းသည်လူတိုင်းအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Oxygen Concentrator (အောက်စီဂျင်စက်)သည်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားသည့်လူနာအများစုသည်လေဝင်လေထွက်နည်းသောနေရာများတွင်နေထိုင်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ ထိုနေရာများတွင်နေထိုင်သောသူများသည်အောက်စီဂျင်စက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှူဆိုင်ရာရောဂါများကိုသက်သာစေသည်။
Oxygen Concentrator (အောက်စီဂျင်စက်)၏အားသာချက်များ
Oxygen Concentrator သည်အားသာချက်ပေါင်းများစွာရှိပြီး coronavirus ကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။
ဘယ်လိုလူတွေ Oxygen Concentrator (အောက်စီဂျင်စက်) ကိုလိုအပ်မလဲ?
နာတာရှည်ရောဂါသည်များ၊ပြင်းထန်သောအသက်ရှူမူမမှန်ရောဂါခံစားနေရသောလူနာများသည်အောက်စီဂျင်အထောက်အပံ့လိုအပ်သည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် COPD၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဝေဒနာရှင်များခံစားနေရသောလူနာများသည်အောက်စီဂျင်ထပ်မံလိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်လူနာများသည် Oxygen Concentrator (အောက်စီဂျင်စက်) ကိုမိမိတို့၏နေအိမ်များတွင်အသင့်ဆောင်ထားသင့်သည်။
နားလည်တတ်ကျွမ်းသောဆရာ၀န်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှသာ Oxygen Concentrator (အောက်စီဂျင်စက်)ကို၀ယ်ယူသင့်သည်။ အိမ်၌၎င်းကိရိယာကိုမည်သို့မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးရမည်ကိုဆရာဝန်များသာ
Oxygen Concentrator (အောက်စီဂျင်စက်) သည်မည်သည့်နေရာများတွင်အထောက်အကူပြုသလဲ?
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအကျိုးကျေးဇူးများစွာနှင့်အတူ Oxygen Concentrator (အောက်စီဂျင်စက်) သည်မိမိအိမ်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်နိုင်သည်ကိုသံသယမရှိသင့်ပါ။ COVID-19
ကူးစက်ခံထားရသည့်လူနာများအနေဖြင့်မိမိတို့၏နေအိမ်တွင် Oxygen Concentrator ၏ကုထုံးကိုသက်သောင့်သက်သာရယူနိုင်သည်။ ThePrint ၏အစီရင်ခံစာအရလူနာများသည်မိမိ၏နေအိမ်တွင် Oxygen Concentrator ၏ကုထုံးကိုအသုံးပြုလျင်အပြည့်အဝလေဝင်လေထွက်ရရှိရန်မလိုအပ်တော့ပေ။ အပျော့စားရောဂါလက္ခဏာရှိသောလူနာများသည်လဲ Oxygen Concentrator ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။
မှတ်ချက် " Oxygen Concentrator ၏ ၈၀% လောက်သည် တရုတ်ပြည်ကထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခုအချိန်သည် boycott ထက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကပိုအရေးကြီးပါသည်ဟုအက်ဒမင်ယူဆသည်။ အကယ်၍ ဂျပန်ကနေ Oxygen Contentrator ကိုဝယ်ချင်ရင် ဒီတရုတ်Website https://www.banggood.com/ja/search/oxygen-concentrators.html ကမှာလို့ရပါတယ် အကောင့်ဖွင့်ဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ်မည်။"
DV lottery ဆိုတာဘာလဲ ?အမေရိကကို DV ထိုးပီးဘယ်လိုသွားမလဲ?